ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်) - ISP Myanmar Peace Desk
Post By Pan Su Wai, On December 15, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၂ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ လေးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ သုံးခုစီ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီတို့မှ တခုစီ အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ သတိပြု အာရုံစိုက်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက်အချို့ကို ISP-Myanmar Peace Desk က အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် ပတ်သက်၍ “ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန” က ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ချက်တခု ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ဆက်လက် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးရေးအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်အထိ ထုတ်ပြန်ထားသော ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြေညာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်များ (ဖြေလျှော့/ တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ မပါ) အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း” ဖော်ပြထားပါသည်။
ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က “ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်” တခု အပါအဝင် ထုတ်ပြန်ချက်သုံးခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
တပ်မတော်၏ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် “ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်”တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်ပါ အပိုဒ်များကို တပိုဒ်ချင်းစီ ရှင်းလင်းတုံ့ပြန်ထားပါသည်။
ယင်းနောက် ထုတ်ပြန်ချက်နောက်ဆုံးအပိုဒ်တွင် “ သဘာဝတရားမျှတမှု တနည်းအားဖြင့် တရားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်အရ အခြေခံစည်းမျဉ်း နှစ်ရပ် ရှိကြောင်း၊ ပထမစည်းမျဉ်းမှာ ဘက်လိုက်မှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယစည်းမျဉ်းမှာ မျှတစွာကြားနာခွင့် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် သဘာဝတရားမျှတမှု မူသဘောကိုအခြေခံ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု သန့်ရှင်းမျှတမှုတို့ဖြင့် သံသယများကင်းစင်ပပျောက်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသင့်ပါကြောင်း” ဖော်ပြထားပါသည်။
ဦးဂါကျေးရွာဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း တပ်မတော်က “ဦးဂါကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အဓမ္မကျူးလွန်ခဲ့သည့်စစ်သည်သုံးဦးအား အကျဉ်းစစ် တရားရုံးချုပ်ဖြင့် စစ်ဆေးပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း” ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်စွဲဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ဦးဂါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့်အမှုအား အကျဉ်းစစ်တရားရုံးချုပ်မှ နှစ်ဘက် သက်သေများ၊ လေ့လာသူများရှေ့မှောက်တွင် ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့် စစ်သည် သုံးဦးအား အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ကျခံစေရန်နှင့် စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းမှ အမြဲတမ်း ထုတ်ပစ်စေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း” ဖော်ပြထားပါသည်။
ထို့အပြင် တပ်မတော်က ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်စွဲဖြင့် “တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Joint Peace Fund (ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့) ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား Virtual Meeting ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း” သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်စစ်တပ်ဦး( ABSDF)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်(PNLO/ PNLA) နှင့် ရခိုင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီ/ ရခိုင်ပြည် တပ်မတော် (NUPA/ AA)တို့မှ ထုတ်ပြန်ချပ်တခုစီ အသီးသီး ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်စစ်တပ်ဦး( ABSDF)၏ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဗဟိုကော်မတီစုံညီအစည်းအဝေး သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် “ အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် မကဒတ၏ ပြည်ထောင်စုမူတွင် အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုင်ရာ သဘောထားများနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရဖော်ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မကဒတ၏ အမြင်သဘောများ ချမှတ်ထားရှိခဲ့ကြောင်း” ဦးစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် “လက်ရှိ ကိုဗစ်- ၁၉ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် တနိုင်ငံလုံး လူမှုအထွေထွေအကျပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် တင်းမာနေသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများအကြား အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရန် အလေးအနက်ပန်ကြားကြောင်း” ABSDF၏ ထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်စွဲဖြင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်(PNLO)၏ “(၇၁)နှစ်မြောက် ပဒေသရာဇ်စနစ် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးနေ့ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်” တွင် “ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ၂၁ ရာ စုပင်လုံအပါအဝင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ဆင့်တွင် ပအိုဝ်းပြည်သူများ ပါဝင်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ “ပအိုဝ်းအမျိုးသား ညီလာခံကြီး” တရပ် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပအိုဝ်းပြည်သူတရပ်လုံးက မိမိတို့နှင့်အတူ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်ပေးကြပါရန် လေးနက်တည်ကြည်စွာဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
“ရခိုင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီ/ ရခိုင်ပြည်တပ်မတော် (NUPA/ AA)အား ဖျက်သိမ်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်”ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် “ ခေါင်းဆောင်အချို့ကို ကျန်းမာရေးအရ အနားပေးပြီး ကျန်ရှိနေသော ဗဟိုကော်မတီဝင်များနှင့် ရဲဘော်များက (NUPA/AA) ကို ဖျက်သိမ်း၍ ULA/ AA အဖွဲ့ နှင့်အတူ ပူးပေါင်းရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်၊ နယ်စပ်တနေရာ အစည်းအဝေးတွင် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း” ဦးစွာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် “၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်တွင် NUPA/AA အဖွဲ့၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှ ဗဟိုကော်မတီဝင် (၉၉ ရာခိုင်နှုန်း) သဘောတူညီချက်ဖြင့် NUPA/AAအဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်၍ ယခင် NUPA/AA အဖွဲ့၏ ပါတီလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ခဲ့သော မည်သည့် လုပ်ငန်းမဆို သက်ဆိုင်မှုမရှိတော့ဘဲ တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း” NUPA/AAအဖွဲ့ က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီမှ “ နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ကြေညာချက်” ကို ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကြေညာချက်တွင် “ လူထုခေါင်းဆောင်၏ ညွှန်းဆိုချက်စကားနှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအားလုံး၏ ဆန္ဒများကို အလေးထားသော ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကို စစ်မှန်သော အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို အခြေခံသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးစိတ်ဓာတ်ဖြင့် တက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်ကာလအတွင်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြန်ကြညာချက်များ လေးခုထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
၇၄-၇၅-၇၆ နိုင်ငံရေးအင်အားစုမှ “ဦးသန့်အရေးအခင်း(၄၆)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်” ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “၇၄. ၇၅. ၇၆ နိုင်ငံရေးအင်အားစုအနေဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိသော “သမဂ္ဂရင်ပြင်နီ” ကမ္ပည်းကျောက်စာတိုင် တည်ဆောက်ရေးကို ကျောင်းသားမျိုးဆက်အသီးသီးနှင့်အတူ အခိုင်အမာရပ်တည်ထောက်ခံလျှက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပြီး စစ်မှန်သော ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနှင့်ကိုက်ညီသော ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေသစ်ကို ရေးဖွဲ့ပြဌာန်းနိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသား ပြည်သူများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းလက်တွဲကာ ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ရပ်တည်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (KHRG) မှ “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်” ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “မြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများသည် ပဋိပက္ခများကို အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရသည့်အပြင် ၎င်းတို့၏ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတို့အတွက် လျစ်လျူရှုခံထားရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်ရောဂါစီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ်သည် မြန်မာပြည်တွင်း နေရာအနှံ့အပြားမှ တိုင်းရင်းသားများ ဘာသာရေးအဖွဲ့ အားလုံးပါဝင်နိုင်စေရေး မြန်မာအစိုးရမှ သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း” ဦးစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်ရောဂါ စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် (CERP)တွင် အခြေခံဝင်ငွေရရှိသူများကို အဓိကဦးစားပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထောက်အပံ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များ၊ KNU နှင့် အစိုးရ နှစ်ဖက်စလုံး၏ အစိုးရဌာနများမှ ကိုဗစ်- ၁၉ ကုစားရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပေါ် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပြီး မည်သူ့ကိုမျှချန်လှပ်ထားခြင်း မရှိစေရန် သေချာစွာ လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း” KHRG ၏ ထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ရက်-မြန်မာနိုင်ငံ (ND-Burma) မှ “(၇၂) နှစ်မြောက် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အတွက် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်” ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ND- Burma အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် မြန်မာပြည် အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အထူးအလေးအနက်ထား စိုးရိမ်မိကြောင်း၊ လုံခြုံမှုနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ မရှိလျှင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ၏ ရှေ့ရေးမှာ အန္တရာယ်ထူပြောနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရပ်သားပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းပါအချက်များကို တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ လိုက်နာရန်လည်း ထပ်မံတောင်းဆိုကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် “အဆိုပါအချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူများအား ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်အတွက် တရားရုံးတင်၍ လေးနက်သည့်ဥပဒေများဖြင့် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” ထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိပါသည်။
အမျိုးသမီးများကွန်ယက်(ရခိုင်ပြည်) WNRS ကလည်း ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်စွဲဖြင့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် တခု ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအခန်းကဏ္ဍများအပါအဝင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်များတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်ရေးနှင့် အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်သည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးကျပါဝင်လာနိုင်စေရေးအား အလေးထား ဖော်ဆောင်ပေးပါရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို တိုက်တွန်းကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် “အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒုက္ခဆင်းရဲမှုများကို ကြုံတွေ့နေကြရသည့် IDP စခန်းများနှင့် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများအပါအဝင် ရခိုင်ပြည်သူများ အတွက် လိုအပ်နေသည့် ထောက်ပံ့မှုများကို ဆက်လက် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ကြပါရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများကို မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းကြောင်း” WNRS က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့သော ထုတ်ပြန်ချက်များ၏ အပြည့်အစုံကို ယခု link တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
By Nyein Ko Ko Soe, On 15/12/2020
By Pan Su Wai, On 15/12/2020